MWEGHACHI NKE FOTO OCHIE NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Mweghachi nke foto ochie na Photoshop
A chọrọ Outlook maka ozi na kpuchie nke LAN ụlọ ọrụ ma na-ezipụ ozi na igbe dị iche iche. Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ Autluk na-enye gị ohere ịhazi ọrụ dị iche iche. Enwere nkwado maka nhazi ihu igwe na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ.
Na-arụ ọrụ na akwụkwọ ozi
Dika ndi ozo ndi ozo, Outlook nwere ike inweta na zipu ozi. Mgbe ị na-agụ akwụkwọ ozi ahụ, ịnwere ike ịhụ adreesị ozi-e nke onye zitere, oge eziga na ọkwa leta (gụọ / agụghị). Site na windo maka ịgụ akwụkwọ ozi ahụ, ị ​​nwere ike iji otu bọtịnụ iji dee ederede. Ọzọkwa, mgbe ị na-agakọta azịza, ị nwere ike iji ndezi akwụkwọ ozi edoziri edozi, ma ha abanyeworị n'ime usoro ihe omume, na ndị ahụ kere n'onwe ha.
Otu n'ime njirimara dị mkpa nke onye na-ezite ozi Microsoft bụ ikike ịmepụta mbido nke mkpụrụedemede, ya bụ, akpa ole na ole e gosipụtara tupu e mepee akwụkwọ ozi ahụ. Njirimara a na-enye gị ohere ịchekwa oge, n'ihi na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịghọta ozugbo akwụkwọ ozi ahụ na mkpụrụokwu ole na ole mbụ. N'ọtụtụ ọrụ ozi, ọ bụ naanị isiokwu isiokwu na okwu abụọ mbụ nwere ike ịhụ, a gaghị agbanwekwa ọnụ ọgụgụ nke akpa mkpụrụ anya.
Ya mere, usoro ihe omume ahụ na-enye ọrụ dị iche iche dị iche iche maka ịrụ ọrụ na leta. Ị nwere ike itinye ya na nkata, tinye otu akara, jiri ya dị ka ihe dị mkpa maka ịgụ, nyefee ya na nchekwa ma ọ bụ kaa ya dị ka spam.
Nchọta ọchụchọ nchọta
Na Outlook, ị nwere ike ịlele kọntaktị nke ndị niile ị nabatala ma ọ bụ zipu ozi-e. Ọrụ a na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe, nke na-enye gị ohere ịchọta kọntaktị ị chọrọ na ntinye clicks. Na windo kọntaktị, ịnwere ike izipu ozi ma lelee ozi profaịlụ.
Ihu igwe na kalenda
Outlook nwere ike ile ihu igwe. Dịka atụmatụ nke ndị mmepe, ohere a kwesịrị inyere aka chọpụta tupu oge ahụ atụmatụ maka ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ole na ole tupu oge. Ọzọkwa, onye ahịa ahụ na-agbakwunye "Kalinda" site n'iji ya tụnyere ọkọlọtọ "Kalinda" na Windows. N'ebe ahụ ị nwere ike ịmepụta listi ọrụ maka otu ụbọchị.
Mmekọrịta na nkeonwe
A na-ejikọta mail niile na ọrụ igwe ojii Microsoft. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na OneDrive, mgbe ahụ i nwere ike ịlele akwụkwọ ozi na akụkụ niile ha na ngwaọrụ ọ bụla ebe Outlook adịghị arụnyere, mana Microsoft OneDrive dị. Njirimara a nwere ike bara uru ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta mgbakwunye chọrọ na Outlook. A na-echekwa ihe mgbakwunye na akwụkwọ ozi na ígwé ojii, nke mere na ha nwere ike ịdị elu ruo 300 MB. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ejikọ ma ọ bụ na-enweta ozi ịntanetị na nnukwu ihe mgbakwunye, nchekwa nchekwa igwe gị nwere ike ịbịara ha ngwa ngwa.
Ọzọkwa, ị nwere ike hazie isi agba nke interface ahụ, họrọ ụkpụrụ maka ụlọ mmanya ahụ. Na ụcha ahọrọ a na-ese n'elu panel na azụ azụ nke ihe ụfọdụ. The interface na-agụnye ikike ịkekọrịta ebe nrụọrụ weebụ dị na ihuenyo abụọ. Dịka ọmụmaatụ, a na-egosipụta ndepụta na mkpụrụedemede abata na otu akụkụ nke ihuenyo ahụ, onye ọrụ ọzọ nwere ike idekọ ma ọ bụ lee folda nwere ụdị edemede ọzọ.
Mkpakọrịta na profaịlụ
A chọrọ profaịlụ na Outlook iji chekwaa ụfọdụ data njirimara. Ọ bụghị naanị na ozi ahụ nke onye ọrụ ahụ jupụtara, ma akwụkwọ ozi na-abata / na-apụ na-agbakwunye na profaịlụ. A na-echekwa ozi profaịlụ ntọala na ndekọ Windows.
Ị nwere ike ijikọta ọtụtụ akụkọ na usoro ihe omume ahụ. Dịka ọmụmaatụ, otu maka ọrụ, nke ọzọ maka nkwurịta okwu onwe onye. Ikike ịmepụta ọtụtụ profaịlụ n'otu oge ga-aba uru maka ndị nlekọta na ndị isi, ebe ọ bụ na n'otu usoro ahụ na multilicense achọta ị nwere ike ịmepụta akaụntụ maka onye ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịgbanwe n'etiti profaịlụ.
Nakwa, na Outlook bụ njikọta na akaụntụ Skype na ọrụ Microsoft ndị ọzọ. Na nsụgharị ọhụrụ, malite na Outlook 2013, enweghị nkwado maka akaụntụ Facebook na Twitter.
E nwekwara ngwa na njikọ na Outlook "Ndị mmadụ". Ọ na-enye gị ohere ịbubata ozi kọntaktị nke ndị mmadụ site na akaụntụ ha na Facebook, Twitter, Skype, LinkedIn. Maka otu onye, ​​ị nwere ike itinye njikọ na ọtụtụ netwọk mmekọrịta, ebe ọ nọ.
Udo nke bara uru na nke oge a n'inwe obodo di elu;
Ọrụ dị mfe na ọtụtụ akaụntụ;
Ikike ibudata nnukwu faịlụ dị ka ihe na-agbakwunye leta;
Enwere ohere ịzụta ọtụtụ ikikere;
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ọtụtụ akụkọ n'otu oge ahụ.
A na-akwụ ụgwọ usoro a;
Ikike nke ịrụ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị adịghị arụcha ọrụ;
I nweghị ike ide ihe na adreesị ozi-e dị iche iche.
MS MSS dị mma maka iji ụlọ ọrụ, dị ka ndị ọrụ na-adịghị mkpa iji hazie ọtụtụ mkpụrụ akwụkwọ ma rụọ ọrụ na otu, ngwọta a ga-abụ ihe na-abaghị uru.
Download nyocha MS Outlook
Anyị na-ahazi Microsoft Outlook maka ọrụ Yandex Kọwaa folda ehichapụ na Outlook Microsoft Outlook: mepụta folda ọhụrụ Microsoft Outlook: weghachite ozi ịntanetị ehichapụ
Outlook bụ onye ahịa ahịa dị elu site n'aka Microsoft, nyere ya ọtụtụ njirimara bara uru na-enye gị ohere ịhazi nhazi na ikesa akwụkwọ ozi, ịhazi ihe omume, wdg.
Atiya: Ndị ahịa Email maka Windows
Onye Mmepụta: Microsoft
Na-efu: $ 136